यि हुन काँक्रो खानुका अपत्यारिला फाइदाहरु, थाहा पाउनु भयाे भने छक्क पर्नुहुनेछ ! - Info Nepal
INFONPLस्वास्थयि हुन काँक्रो खानुका अपत्यारिला फाइदाहरु, थाहा पाउनु भयाे भने छक्क पर्नुहुनेछ !
यि हुन काँक्रो खानुका अपत्यारिला फाइदाहरु, थाहा पाउनु भयाे भने छक्क पर्नुहुनेछ ! काँक्रो बाह्रै महिना फल्नेमल मध्येकाे एउटा फल हो । यो स्वादका लागी मात्र नभइ स्वास्थका लागी पनि उत्तिकै उपयोगी हुन्छ । यसको सलाद बनाउदा पनि उतिकै चोपिलो हुन्छ ।
काक्रो सेवन जतिबेला पनि गर्न सकिन्छ । प्राय यो गर्मी मौसममा बढि सेवन हुने गर्दछ । काँक्रोको सेवन गर्दा विभिन्न किसिमका रोगबाट बच्न सकिन्छ । काँक्रोमा पानीको मात्रा ९६ प्रतिशत हुन्छ । मानिसको शरीरमा पानी आपूर्ति गर्न काँक्रो सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिन्छ । पोषण र पानी पाइने भएकाले काँक्रोले तौल घटाउँन पनि मद्दत गर्छ ।
यसको टुक्राले आँखाको रातोपना र सुन्निएको घटाउँन सहयोग गर्छ। यसमा पाइने फाइबर र पानीले खाना पचाउँन सहयोग गर्छ।यसले खराब कोलेस्टेरोल पनि घटाउन मद्दत गर्छ ।
मुख र गिजालाई ताजा राख्न र गिजाका समस्या समाधान गर्न पनि यसले सहयोग गर्छ। काँक्रोमा पाइने सिलिका कपाल, नङ र छालाका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छन् । त्यसैले काँक्रो सौन्दर्यता बढाउँने खाद्यपदार्थ हो ।
याे पनि, दु-र्घटना पछि गायिका टिका सानुको अवस्था यस्ताे, पलपल रोईन, आमाबुवा सम्झेर भक्कानिइन (भिडियो हेर्नुस्) । दु-र्घटनामा परेर बेड रेस्टमा रहेकी टिका सानु मिडियामा आएकी छिन् । शिशिर भण्डारीसँग कुरा गर्दै टिकाले आफ्नो हालको अवस्थाको बारेमा बताईन् ।
के हो निपा भाइरस ? यस्ताे छ यसका लक्षण र जाेगिने उपायहरु ! पढेर सेयर गर्नुहाेला